rafozan-doza | Dago | 4
Varoty ny Air Mad!
Somary sadaikatra ihany ah mahita an'ity resaka Air Mad (Mad avy @ teny baiko hoe adala ).
i hery tatsy niiteny hoe tokony lojika tsotsotra sy hoe leadership @ tokony ho izy no ampiasaina dia mazava ny lalana. Marina ary ekeko 150% ny zon'ny mpiasa hitokona ra misy tsy mahafaly azy. Ny tiako ho tsindriana @ izay dia ilay hoe "zon'ny mpiasa". Raha mandinika tsara isika @ ireny hoe syndicat sy hoe fivondronan'ny mpiasa ireny rehefa migrevy dia ny hoe hampiakarana karama ee na hoe tambi-karama isan-karazany na hoe tontolo ao ampiasana. Ity indray mitoraka ity kosa anefa dia hoe fanesorana ny mpitantana ny orinasa no takiana. Zany hoe otran'ny hoe fitakiana ny zon'ny mpampiasa ve izany sa ahoana?
Dia gaga fotsiny enao hoe euh fa ahoana koa ary izany? Voalohany indrindra aloha dia tokony mazava @ mpitokona fa dia izay manana antoka izany hoe ny aksionera ihany no manana zo hoe hanala ny mpitantana ny orinasa. Izany hoe ra tsy tompony ianao tsy tokony hitabataba @ fomba hitantanan'ny olona ny orinasany izany mihitsy. Eny e, tsara ny mitondra hoe "constructive criticism" fa tokony mahalala ny toerana misy anao ianao fa tsy hanao vinanto tsy mahare fosa any akory. Tsy haiko tsara ny hoe firafitry ny hoe Air Mad, asa mety aksionera koa nga ny syndicat an'ny mpiasa. Ra izay no izy dia tokony any @ hoe conseils d'administration izy izany no manova zavatra. Tsy mahagaga intsony moa ny eto amintsika fa efa izany ngamba ny norma ee. Fady antsika izany hoe miditra tribonaly na hoe miandry fifidianana izany, izay zavatra manara-dalana tokony ho izy fa ny antsika tonga dia ny migrevy sy manongam-panajakana ihany ny vahaolana tonga ao an-tsaina voalohany indrindra. Na le mpigrevy na ilay higreviavana samy tsy manana ny rariny doly.
Faharoa, tsy mazava tsara ihany koa ny takian'ny mpigrevy. Hoe esory ny mpitantana. Manana proposition ana olona tiany hitantana ve izy izany? sa hoe refa tsy ireo dia izay? mitovy @ le hoe Tout sauf Zafy, Ratsiraka, Ra8 et Andry Tgv? dia miverina @ le teneniko teo ihany hoe fa andrizareo nga ny orinasa? Eny ee, mazava fa orinasam-panjakana io. Izany hoe an'ny vahoaka. Solotenan'ny vahoaka ve izany ny mpiasan'ny Air Mad? Dia atao inona fotsiny zany ireo ao Antsibazaza ireo?? Tsia, tsy ny rajako ny tiako tenenina fa ilay olom-boafidy ao @ antenimiearam-pirenena. Satria ra misy olona tia mitabataba tsisy otran'ireo. Atao daholo izao decheance ee, motion de censure ee, tsisy tany iaianana iasana mintsy izany le mpitondra... kanefa dia nahoana ary izay no tsy re sy hoe mandrara an'ity resaka orisam-panjakana ity? sa rehefa tsy misy idiran'ny hoe tombotsoa sy hoe resaka seza dia tsy koi? aleo ho faty any fa misy miditra any ampaosiko nga izany?
Averiko indray fa tsy hoe tsy tia ny hetsiky ny mpiasa akory ah na hoe ny mpiasa mivondrona mitambatra hiady @ tsy rariny na koa hoe manohana an'ity fitondran'i Rajao ity. Tsia, tsy any velively ny tiako hahatongavana. Ny tena marina kokoa ary ra jerena @ saina tsy miangatra. Ra tena marina tokoa ny resaka "gabegie" @ fomba fitanana ny Air Mad izay voalazan'ny mpiasa azy. Tsy tokony hoe efa ela ve no voaroka ireo mpitantana ireo? Eny e, mety hoe lasa sosialisma koa ny antsika (@ le hevitra hoe elefanta fotsy fa tsy le hoe antoko ankavia eo @ fitondrana an) fa ra za no manana akoho tsy mety manatody izany efa ela no nataviziko an.
Dia zay ee. Mazava be le resaka hoe ny gaboraraka kay dia ny fanjakana iray manotolo mihintsy. Izany hoe le olona tokony sy hoe afaka mitondra ny fiovana mihintsy no tena gaboraraka. Eny, andriamatoa filoha hajaina Hery Rajao no tiako tenenina voalohany indrindra. Ny fanodikodinana ny Air Mad atao toy ny hoe fananan'ny filoha izany dia zavatra tena otran'ny hoe adalana miaro tsinjaka. Ary zavatra faran'ny izay hoe mora ny tsy manao an'zany. T@ nanala an'i ra8 izany dia hoe ee ee Air force I sy II mambotry vahoaka dia avy eo i tgv nivarotra an'ireo fa saingy ny Air Mad indray ny anazy no nahodiny hifanandrify @ itineraire-ny. Dia izao koa i Rajao tsisy fiovana fa dia izany ihany na hoe vao mia namafisina aza ilay adalana... Dia hoy ah hoe izao rehetra izao no mitaratra ny fahendrena, ny fitondra-tena ary ny etika an'ny mpanao politika Malagasy. Tsy misy na iray aza hoe olona tena hoe tonga hitondra @ hoe tokony ho izy. Eny e, na dia hoe minimum de bon sens sy hoe integritE fotsiny aza dia ee... tsy manakivy ah fa ra zao ny mitohy dia manahy mafy fa na afaka 55 taona manaraka aza dia ny omaly ihany no tsy hiova.
Raha ny vahaolana tiakoa tantaraina indray dia io lohateny io hoe: varoty any io Air Mad io. Tsy ny Air Mad ihany fa izay orinasam-panjakana rehetra ka natao hiodina toy ny orinasa tsy miankina rehetra. Ohatra ny hoe Ny Aro, Ny Havana, CNAPS,... manamora ny hoe "efficiency" @ ireny orinasa ireny ka hiodina ary hiezaka ny haka tombony araka ny hoe maha capitalista azy ny fanaovana an'izany. Eny e, theoriquement izany tsara kokoa ra tsy ny fanjakana no mitantana an'ireny... Ny hoe modalitE anaovana an'izany no mila dinihana tsara satria tsy tokony hamerina ny hoe natao t@ ireny hoe privatisation gaboraraka t@ andron'ny ajustement structurel no-forcer-n'ny BM sy FMI ireny izany. Izay tsy nampitombo ny tombotsoan'ny mpanjifa araka ny hoe hisian'ny fifaninana malalaka fa plutot hoe nampatanjaka kokoa an'ny hoe neocolonialism. Izany hoe ny firenen-dehibe manao jadona @ alalan'ny orinasany sy ny volany miodina aty tany mahantra. Tokony hoe operateurs Malagasy ny mahazo ny hoe actionera majoritera @ ireny orinasa ireny izany. Na fara faharatsiny hoe Maurisianina na hoe Afrikanina... mbola lahatsoratra hafa koa ny hoe actions tazomin'ny fanjakana sy ny hoe inona ny mahasamihafa ny Maurisianina sy Afrikanina @ hoe Frantsay na hoe Rainboto, Bekitana ary ny Sinoa??
Ny JIRAMA aloha tsy tokony voakasik'izany ary tokony manana control direct @ fitantanana sy ny hoe fanovana ny vidin'ny jiro sy rano ny fanjakana. Satria stratejika be io ary tonga dia misy fiantraikany avy hatrany @ fiainam-bahoaka sy ny hoe fiodinan'ny orinasa eto antoerana. Ny fitanana sy ny hoe fanesorana ny gaboraraka kosa anefa dia tokony hoe tantanan'ny hoe "consultant" nga sa inona ny filazana an'zany. Otran'ny efa nisy resaka otran'zany nisihosiho t@ andron'i ra8 fa avy eo le izy tonga dia nampiboridana tanteraka ny adalana miaro tsinjaka rehetra tao @ fitantanana ny JIRAMA dia tsy nety satria mazava hoazy fa nisy ny delestazy... Ny tiako hahatongavana dia ny hoe mila sarahina ny fitantanana taktika sy ny hoe stratejika... Ny taktika izany ilay hoe mamono afo sy manao izay hivelomana androany sy rampitso. Ny stratejika kosa dia mitsinjo ny hoe afaka 5-10 taona ah tokony milamina ny rara ary mandry saina ny vahoaka.
Izao rehetra izao no hitenenako hoe tsy dia mety loatra ny mametraka hoe comptable ho ministry ny vola, fitantanam-bola ary ny harena. Ary io no tena mety hoe defaut an'i Rajao satria ny olana eto amitsika tsy ho vitan'ny hoe fanadiovana (assainissement) fotsiny fa mila restructuration sy hoe reforma goavana hampitodihana ny ekonomia @ lalana anakiray hoe mety mitondra any @ fandrosoana. Ilay hoe "orientation" no tsy ampy na hoe tsy misy ny tena marina ee... Satria ra io resaka Air Mad io fotsiny dia efa hita taratra be hoe tsy fahamatorana ara-politika voalohany, tsy fahaizana mitantana faharoa ary tsy fananana stratejia hoe ahoana ny hampiodinana ny hoe economia malagasy.
Ny tiako hahatongavana dia ny hoe tsy tokony ho hisy olana akory io Air Mad io. Mila mahatsapa tena fotsiny ny mpitondra hoe ajanony ny gaboraraka @ fanodonana ny fiaramanidina hanaraka ny itineraire-n'ny mpitondra. Soloy ny mpitantana, ovay ho consultants refa tsy mahita marimaritra iraisana @ mpigrevy. Mila hoe obligation de resultat izany e. Izay no tokony fepetra voalohany indrindra. Ary farany mila stratejia hivoahana @ itony orinasam-panjakana izay tokony hahomby sy hoe hahazo tombony itony kanefa miteraka olana sy matiantoka foana matetika. Izany no atao hoe "leadership".
Atsipy ny vilia vaky!
Tratry ny fety doly alou ee
Zanahary hoe tahio ny tanindrazanay. Mba omeo fahendrena ny mpitondra na ny eo @ fitondrana izany na ireo mpamingana ny eo @ fitondrana na ny mikasa ho eo @ fitondrana ary indrindraindrindra ireo olo-manga (<- Maihol ) tokony ho eo @ fitondrana.
06/22,2015 Sokajy Dago
«Mialoha 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 57 58 59 Manaraka»